odd-news Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / odd-news
मानिसको पुर्खा चौध घण्टा सुत्छ
by Bijay Dhungel
Tags: animal, gorilla, odd-news, sleep
खवरडेस्क, २१ मङ्सिर । मानिसको पुर्खा भनेर मानिएको गुरिल्लाको सुत्ने बानी अचम्मको छ । गुरिल्ला प्रत्येक दिन औसतमा चौध घण्टासम्म सुत्छ । जंगलमा समय बिताउने यो जनावर पात, फलफुल खाएर बाच्छ ।
खाना र पानी बिना मानिस कति दिन जिवित रहन सक्छ
Tags: food, human-interest-news, odd-news, water
खवरडेस्क, १९ मङ्सिर । खाना र पानी बिना मानिस कति दिन जिवित रहन सक्छ होला – वैज्ञानिक तथ्य अनुसार एउटा मानिस कुनैपनि आहाराका सेवन नगरी एक महिना सम्म बाच्न सक्ने पाइएको छ । खानाबिना एक महिना बाच्न सक्ने मानिस पानी… बाँकी अंश »
दुधमा रमाउदै मोडेल हरु
Tags: alert-news, models, odd-news
खवरडेस्क, १८ कात्तिक । दुधमा रमाउदै मोडेल हरु फोटो स्रोत
ब्ल्युटुथ डेनमार्कका राजा हुन्
Tags: bluetooth, odd-news, technology, wireless
खवरडेस्क – ३१ भदौ । जिम कार्डक मोबाइल फोनबाट कम्प्युटरमा तार रहित डाटा पठाउने प्रविधिको परिक्षण गरिरहेका थिए । त्यही समयमा उनी प|mान्स गनर वेन्डटसनको ऐतिहासिक उपन्यास ‘द लङ सिप ‘ पनि पढिरहेका थिए । जब उनले सो प्रविधिमा सफलता पाए… बाँकी अंश »
आलर्म क्लक म्यान
Tags: alert-news, odd-news
खवरडेस्क – ३० भदौ । बिहान ७ बजेको परिक्षामा जानु पर्नेछ । पढ्दा पढ्दा बिहान ३ बजिसक्यो । अब तपाईलाई निन्द्रा लाग्यो र सुत्न जानु पर्ने भयो । तर बिहान परिक्ष दिन जान उठ्न सक्दिन जस्तो लाग्यो भने तपाई के… बाँकी अंश »
जापान का केहि तथ्य हरु
Tags: alert-news, nepaljapan, odd-news
खवरडेस्क – २६ भदौ । १. जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय खाना घोडाको मासु हो । २. जापानको करिब ७० प्रतिसत भूभाग हिमाली भेगले ओगटेको छ । ३. जापानमा बाषिर्क रुपमा करिब १५०० वटा भुइचालो जान्छन् । ४. विश्वको सबैभन्दा बढि जडिबुटी खपत… बाँकी अंश »
शङखेकिरा करिब तीन बर्ससम्म सुत्न सक्छ ।
खवरडेस्क – २६ भदौ । केही महत्वपुर्ण तथ्यहरु : मानिस का लागी बनाइएका परिवार नियोजनका पिल्स चक्किले गुरिल्लाको पनी गर्भ रोक्छ । विश्व चर्चीत चीत्र मोनालिसाको आखिभौँ छैन । नछरिने एक मात्र खाना मह हो । चन्द्रमामा अहिलेसम्म बाहृजना व्यक्तिले हिडेका… बाँकी अंश »
लेडि गागाका बारेमा
Tags: featured, lady-gaga, odd-news
खवरडेस्क – १७ साउन ।लेडि गागा गायिका मात्र नभएर गित लेखक, मोडल, रेकर्ड प्रोडसर, डान्सर, फेसन डिजाइनर, हिरोइन, बिजनेसउमेन तथा मानव अधिकारवादि र समाजसेवि पनि हुन् । लेडि गागालाई स्कलमा साथिहरुले ‘खरायोको दाँत जस्ती ‘ भनेर जिस्काउथे । लेडि गागाको वास्नविक… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, energy, featured, football, newidea, odd-news, soccket
खवरडेस्क – ७ साउन । हालै अमेरीकामा एउटा यस्तो फुटबल आविस्कार गरिएको छ । जसलाई आधा घण्टा खुटाला हानेपछि करिब ५ वाटको एल ई डि बल्ब ३ घण्टा पुरा बल्ने गर्छ । यस फुटवलको नाम सकेट राखिएको छ । हावा रहित… बाँकी अंश »
अब पुलिस को हेल्मेट रोबोकप जस्तै
Tags: alert-news, helmet, in-focus, odd-news, Police, robocop
खवरडेस्क – ६ साउन । यूनिवर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्स का २ ३ बर्षीय बिद्यार्थी ले हेल्मेट को नया डिजाइन बनाएका छन् । अलफ्रेड बयाडगिसले तयार गरेका अत्याधिनीक प्रबिधिको प्रहरीको लागि उपयुक्त हेलमेट चाड्नै नि अष्टेलिया लगायत अमेरीकामा प्रयोगमा आउने छ ।… बाँकी अंश »